FBC - Oromiyaatti ji'oottan 6n darbanitti meeshaaleen koontiroobaandii Birrii miiliyoona 94 olii to’atameera
Tigraay sirreeffamtoota 2206 gadhiisufi
Mariin gamaaggama raawwii karoora walakkeessa KGT 2ffaa Oromiyaa gaggeeffamaa jira
Iddoowwan rooba guddaa argatanitti lolaan tasaa mudachuu akka danda’u akeekkachiisi kenname
Oromiyaatti ji'oottan 6n darbanitti meeshaaleen koontiroobaandii Birrii miiliyoona 94 olii to’atameera
Finfinnee, Amajjii 8,2010(FBC) –Koomiishiniin Poolisii Oromiyaa baatiiwwan 6n darbanitti meeshaalee daldala seeran alaa fi koontiroobaandii Birrii miiliyoona 94 fi kuma 800 ol ta’u mootummaaf galii taasiseera.
Mootummaan naannichaa haaromsaan booda rakkoo bulchiinsa gaarii fi kiraa sassaabdummaa hiikuuf hawaasa waliin to’annaa taasiseeni meeshaaleen kanneen to’annaa jala kan oolfaman.
Draamaa koontiroobaandii kiraa sassaabdonnii fi abbootiin qabeenyaa maxxantoota ta’an naannichatti tabachaa turaniin dinagdeen Oromiyaa fi biyyaa miidhamaa tureera.
Koontiroobaandii kun miidhaa diinagdee geessisuurra darbee, walitti bu'iinsa lammiilee obbolummaadhan bara hedduu jiraatan gidduutti waldhabdeen akka uumamuuf kiraa sassaabdota sonba koontiroobaandidhaan harganaa turaniin shirri xaxamaa ture hojii manaa guddaas ta'ee darbeera.
Abbaan adeemsa hojii midiyaa, koominikeeshinii fi bakka bu'aa itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Koomiishinii Poolisii Oromiyaa Koomaandar Guddisaa Guutamaan Faanaa Broodkaastiing Koorporeetittti akka himanitti, koomiishinichi hojiin qindoominaa bara darbe hojjetaa ture akkuma jirutti ta'ee, bara kana xiyyeeffannoo olaanadhaan hojjechaa jira jedhaniiru.
Kanaanis oomishni bunaa seeran alaa gara giddu gala biyyattiitti kallattii garaagaraa irraa geejibsiifamaa ture kuntaalli 6,842 Birrii miiliyoona 47.7 baasu to’atameera.
Sukkaarri seeran ala socha'aa ture kuntaalli 5,067 Birrii miiliyoona 12.2 baasuu fi zayitni nyaataa liitirri 171,0173 Birrii miiliyoona 11.5 ol baasu baatiiwwan darban ja’an keessatti to'annoo jala olera.
Dabalataanis, bu'aaleen bosanaa kanneen akka cilee fi xaawlaa seeraan alaa fi eeyyama darbii malee socho'aa ture Birrii miiliyoona 4.050 olitti tilmaamamu, meeshaaleen elektirooniiksii, uffataa fi huccuuleen garaagaraa karaa daangarraan gara gidduu gala biyyattiitti dabarfamuuf ture Birrii miiliyoona 21. 4 ol baasus to'annoo Poolisii Oromiyaa, hirmaannaa ummatumaan deeggarameen to'annoo jala olfameera.
Koontiroobaandii daddabarsa Doolaara seeran alaan bara 2009n, Doolaarri Ameerikaa hedduu to'annoo jala oolfameera.
Bara kanas baatiiwwan ja’an darbanitti yeroo Doolaarri Ameerikaa kuma 500 fi kuma 53 ol ta'u karaa seeran alaan Oromiyaa qaxxaamuree darbuuf turetti qabameera.
To'annaa koontiroobaandii tumsa hawaasa naannittiitin dabaalamuun taasifame kanaan kurmaana lamaan darbaniin Doolaara seeran alaan qabameen alatti, Birriin miiliyoonni 94 fi kuma 800 fi kuma 67 ol meeshaalee qabamanirraa argamee mootummaadhaf galii ta'eera.
Namoonni 352 hojii badaa kana keessatti hirmaatanii murtoo seeraa kan argatanii fi adeemsa himannaarra kan jiranis jiru.
Qaamoleen nageenyaa muraasnis gocha kana keessatti hirmatanii argamaniiru.
Koomiishiniin Poolisii Oromiyaa koontiroobaandii fi kiraa sassaabdummaa to’achuurratti hawaasa waliin qindoomee hojii hojjetu kan cimsu ta’uus Koomaandar Guddisaan ibsaniiru.
Dargaggoonni meeshaalee koontiroobaandii wayita arganii fi isaan mudatu ofii itti darbuun to'achuuf yaaludhaan heera darbuu fi balaadhaf of saaxiluurraa of eeggachuun, eeruu qaban poolisiif himuun poolisiin akka to'atu gaafachuudhan tumsa isaanii itti fufuu qabuun dhaamaniiru.
Bizu'aalam Beenyaatu gabaase
Oduuwwan Biroo « Finfinneetti waggaa darbe namoonni kuma 800 ol faalama naannon dhibeef saaxilamaniiru	Ityoophiyaa fi Soomaalee Laand buufataalee dabalataa waliin misoomsuf waliigalan »
Arsenaal Leenjisaa Unaay Imireen qacare
Ameerikaa Bulchiinsi Kaaliforniyaa manneen-jireenyaa haaraa sahaaniiwwan solaarii waliin akka ijaaraman barbaadaa jirti
Teemiraa fi fayyaa